झाडापखला निको पार्नेदेखि क्यान्सर लाग्न नदिने अम्बाको पात बहुउपयोगी…हेर्नुहोस ।(प्रयोग गर्ने तरिका सहित) – yuwa Awaj
कार्तिक १९, २०७७ बुधबार 15
काठमाडौं : सबैलाई ज्ञात भएको कुरा हो, अम्बा एक सुपर फलको रूपमा चिनिने गर्दछ। अम्बामा पाइने थुप्रै गुणकारी तत्वले मानिसको स्वास्थलाई धेरै फाइदा हुने गर्दछ। अम्बामा पाइने भिटामिन सी, लाइकोपिन र एन्टीआक्सीडन्टहरूले छालाका लागी लाभदायक हुन्छ।
अम्बामा रहेको पोटासियमले रक्तचापकोस्तरलाई सामान्य बनाउन मद्दत गर्दछ। यसैगरी, यसमा ८० प्रतिशत पानी र उच्च फाइबर भएकाकारण तौत घटाउन पनि सहयोग गर्दछ। यी सबै त भए अम्बाका फाइदाहरु तर, के तपाईंलाई थाहा छ अम्बाको पातहरु पनि स्वास्थका लागि बहुउपयोगी हुन्छ भनेर ?
अम्बाका पातहरु मेक्सिको तथा दक्षिण अमेरिकाको केही भागहरूमा परम्परागत औषधिकोरुपमा प्रयोग गरिन्छ।
उक्त ठाउँहरुमा अम्बाका कलिला पातहरुको चिया बनाउने गरिन्छ जसमा भिटामिन सी, क्वेर्सेटिन र एन्टिअक्सिडेण्ट प्रशस्त मात्रमा पाइन्छ।
Prevदैनिक एउटा अमला खानुका यस्ता छन् अचम्मैको फाइदाहरु हेर्नुहोस् ।
Nextसुत्नुभन्दा अगाडि यसरी उमालेर खानुको यति धेरै फाइदाहरु…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।
असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1361)
२.	असार ७ पछि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गरिने (1361)